Galocher - Mot du Jour - Igama lesiFrentshi ngosuku
by ULaura K. Ungekho
(engafanelekanga) kumbundu wesiFrentshi
Il n'a jamais galoché sa copine - Akazange abe ngumFrentshi wamanga intombi yakhe.
U-Dominique noClaude baphelile kwi-galocher - uDominini noClaude bachithe iiyure ezenzileyo .
Ukunyaniseka kweelwimi okuye kwaba khona ukususela kwiMfazwe Yehlabathi I ekugqityiwe. Xa amajoni abuyela eUnited States ngolwazi olutsha olutsha lokubanga ngeelwimi, bawabiza ngokuthi le ndlela yobungqina bothando lwesiFrentshi. Nangona kwakungekho phetoli elula yesiFrentshi; i-clunky elinganayo isoloko ihamba kunye nemigca ye- embrasser ne la langue okanye i-franglais do le le french kiss . Inkomfa ka-2014 yeLe Petit Robert , eyapapashwa ngo-2013, ishintshile yonke into: ukuguqulelwa okusemthethweni " kokubamba isiFrentshi" yi- galocher .
Ukuba eli lizwi elitsha likukhumbuza ngamagqabi, kunesizathu esihle: un galoche lithetha " ukutshitshana kwesiFrentshi" ukususela ubuncinane kuma-70 * * kodwa kwakuthetha "i-galosh" okanye "i-overshoe" ngamakhulu eminyaka ngaphambi kokuba, unike i- galocher uhlobo uxhumano lwe-onomatopoeic phakathi kwesandi esilungileyo esenza kwisitalato esinyeneyo kunye nokuba ulwimi lwenziwa ngexesha lokubamba isiFrentshi. Umfana ongumFrentshi womhlobo wam uthi isenzi sinento engathandekiyo, ngaphezulu kwimizila yokumangazela okanye ukunyuka ebusweni kunokuba kunqabileyo kakhulu "ukunqabana kwesiFrentshi" okanye ukungathathi hlangothi "ukwenza."
* Kuyathakazelisa ukuba kuthethwa kakhulu ngaleli gama, kuba i- galoche ithetha ukuba "u-kiss kiss waseFransi" ibonakala kwi- Grand LeRobert ka-2005, eyayihlawulela ubuncinane kwi-1976. Iindaba zaseFransi kubonakala ukuba kubonakala ngethuba lokuqala kwi- Petit Robert encinane kodwa kufumaneke ngakumbi, nangona akukho mntu uthethe oku - onke amanqaku akwenza ukuba kuvelele ngathi okokuqala ngqa i- galoche iboniswe kuyo nayiphi isichazamazwi. Ngokwahlukileyo, imithombo yolwimi lwaseNgesi igxininise kwisenzi, okwenene ukungena kwinto entsha.
Amagama aseNgesi athi "isiFrentshi"
Faire la bise - isangqa sesiFrentshi esikhanga
Ils se font un nom en entrant dans le dico (Le Parisien)
'Xhosa Kiss' ekugqibeleni liLizwi leLizwi eFransi (i-Time Magazine)
Ukubhengezwa: [ga luh shay]